15 Siyaabood Oo Lacag Loogu Bixiyo Si Loogu Turjumo Luqadaha Khadka 2022
Bogga ugu weyn 15 Siyaabood Oo Lacag Loogu Bixiyo Si Loogu Turjumo Luqadaha Khadka 2022
Miyaad xusuusataa fasaladaas "afka qalaad" ee lagugula taliyay (mararka qaarkood xitaa lagu qasbay) inaad qaadato dugsiga sare?
Waxaa laga yaabaa in qoyskaagu u guuray meelo badan oo caalami ah markii aad yarayd oo ay ahayd inaad soo qaadato dhawr luqadood.
Haddii aad kuwaa si dhab ah u qaadatay, waxaan helay war wanaagsan - waxay ku dhow yihiin inay wax bixiyaan, macno ahaan. Sidee? Jawaabtu waa sahlan tahay - waxaad ku heli kartaa lacag si aad luqadaha ugu turjunto online.
Dhab ahaantii Fun: Celcelis ahaan turjumaanku wuxuu samayn karaa ilaa $51,830 sanadkii. Haddii aad i waydiiso, taasi waa lacag fiican. Stats waxa kale oo ay sheegtaa in heerka shaqaalaysiinta ee turjumaanada la saadaalinayo in uu kordho in ka badan 20% tobanka sano ee soo socda - xitaa in ka badan goobaha caadiga ah qaarkood.
Si aad ugu bilowdo safarkaaga turjumaadda, waxaan wax ka qaban doonnaa cinwaannada hoose ee soo socda:
Haddaba, aan u dhaadhacno hawsha;
Waa maxay dhab ahaan tarjumaanku?
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato sidaad lacag ku heli lahayd si aad luqadda ugu turjunto online
Sida Loo Helo Lacag Lagu Turjumo Luuqada Online
Dunida Cinwaan -hoosaadyada iyo Sida Looga Helo
15 Turjumaan Madax -bannaan iyo Shabakado Cinwaan
Meesha Lagaga Bixin Karo Si Looga Turjumo Dukumentiyada Fudud ee Gurigaaga
Maqaallada lagu taliyay
Shaqada turjumaanku waa inay si sax ah u gudbiso farriinta qoraalka qoran oo ka timid luuqad laga soo bilaabo luqadda bartilmaameedka ah.
Waxaa inta badan lagu qasan yahay tarjumaadda, taas oo la mid ah, laakiin farqiga u dhexeeya ayaa ah in turjumaannadu aysan ku shaqayn qoraallo qoran; turjumaanno waxay ku turjumaan waqtiga dhabta ah 'fadhiyo toos ah'.
Turjumaanadu badiyaa waxay ku shaqeeyaan qalab qoran oo ay ku jiraan xarfo, warbixino, maqaallo, buugaag, iyo wixii la mid ah.
Si tan loo sameeyo, waxay adeegsadaan qalab aad u ballaaran - tusaale ahaan qaamuusyada, qaamuusyada, iyo software -ka turjumidda.
Mar haddii qoraalka la turjumayo uu yahay mid dhaqan gaar ah, waa shaqada turjumaanka in si habboon loogu wargaliyo dhaqamada la beegsanayo iyo in luqadaha la turjumayo si sax ah loogu gudbiyo farriinta loogu talagalay.
Waxaad ka akhrisan kartaa tan: 21 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siin Karo Sawirro [$ 100+] | 2022
XIDHIIDHKA: Sida Lacag Loogu Sameeyo ESO -Shaqaalaha Waayeelka Online | Tilmaamaha Buuxa ee 2022
Turjumaanada badankoodu waxay ku shaqeeyaan si madaxbanaan ama heshiis qandaraas ah badidoodna shaqadoodu waa onlayn - gaar ahaan masiibada hadda jirta oo sababtay in shirkadaha adduunka oo dhami ay qaataan fikradda ah 'xafiis dalwad' ah.
On guddiga shaqada, kuwan soo socda ayaa lagu taxay sharaxaadda shaqada turjumaan:
Wax akhriska iyo baadhitaanka eraybixinta u gaarka ah warshadaha
U beddelidda qoraalka iyo cajaladaha maqalka ee hal luqad hal ama in ka badan
Hubinta qoraallada la turjumay waxay gudbinayaan macnaha asalka ah iyo codka
U diyaari subtitles fiidiyowyada iyo bandhigyada internetka
Tix-raaca qaamuusyada khaaska ah iyo aaladaha turjumidda si loo hubiyo tayada tarjumaadda
Qoraallada la turjumay ee caddaynaya naxwaha, higgaadda, iyo saxsanaanta xarakadaha
Dabagalka xubnaha kooxda gudaha iyo macaamiisha si loo hubiyo in turjumaaddu buuxiso baahidooda
Tafatir waxyaabaha ku jira isha ku haynta qaabkiisii ​​hore (tusaale ahaan font iyo qaab -dhismeed)
La xiriir khabiirada goobta si aad ugu sii socotid qalabka turjumidda iyo dhaqamada cusub
Waxay u ekaan kartaa wax badan, laakiin ma aha wax sidaas u adag in lala qabsado, oo qof kasta oo qiimahiisa milixdu u qalmo ayaa qaban kara hawlahan.
Sida Loo Bixiyo Lacag Si Loo Turjumo luqadda online
Sida shaqooyinka badankood, waxaad u baahan tahay inaad samayso arji. Hayso, ka hor intaadan codsan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad u qalantid inaad noqoto turjumaan.
Hadda, haysashada shahaadada bachelor-ka ee maaddo la xiriirta luuqaddu waa faa'ido dheeri ah (iyo shuruudo mararka qaarkood), laakiin had iyo jeer maahan daruuri.
Si kastaba ha ahaatee, si toos ah uma qalmi doontid sababtoo ah waxaad si fiican u taqaanaa luqadda; waa in aad tababar qaadato. Haddii ay tahay in lacag lagu siiyo si aad ugu turjunto onlayn, waa in aad sare u qaadaa dhammaan naxwaha, erayada, iwm. ee luqadda.
Ku qaadashada koorsooyin lacag -bixin ah khadka tooska ah, kor u qaadista xirfadahaaga kombiyuutarka, iyo ka -helidda waayo -aragnimada shaqooyinka lacag -bixinta yar ayaa runtii kaa caawin kara kor u qaadista resumeygaaga. Waxaa jira xitaa website -yo diyaar u ah inay shaqaaleeyaan turjumaanno bilow ah oo aan lahayn khibrad.
Ka sokow bogagga turjumaanka madaxa -bannaan ama shaqooyinka qandaraaska, halkan waxaa ah siyaabo kale oo aad ku bixin karto adeegyada turjumaaddaada:
Samee fiidiyowyo luqadeed YouTube -ka ama bilow blog -luqad
Bar afka qalaad
Noqo hage dalxiis
Abuur qaamuus qaas ah oo lagu iibiyo; ereyada farsamo gaar ahaan
U fidiya adeegyadaada qorayaasha oo hel faa'iidooyinka tarjumaadda. Waxaa laga yaabaa in laguu diido marar badan, laakiin iska jir oo maalin maalmaha ka mid ah ayaad dahab ku dhufan doontaa - dahabkuna wuu sii socon doonaa.
XIDHIIDHKA: Samee Lacag Lagu Iibiyo Caanaha Naaska Online
Marka, laga yaabee inaad ku dhowdahay, dukumiintiyada caajiska ah ee waqti dheer ma aha wax adiga kugu saabsan. Waxaad ka fiirsan kartaa subtitling.
Cinwaan -hoosaadyada waxay bixiyaan qoraal qoraal ah oo wada -hadalka ah - iyo, mararka qaarkood, saamayn kale oo dhawaaqa - oo ku jira faylka fiidiyaha.
Waxaa jira saddex nooc - guud, qoraal hoosaad xiran (oo ay ku adag tahay maqalku ama dhegoole), iyo qoraal hoosaadyo luqadeed (halka tarjumaaddu ka timaaddo).
Qorista cinwaan hoosaad, ama cinwaan hoosaad, waa habka qaadista qoraalka fiidiyowga (ama si toos ah ula shaqeynta fiidiyaha) iyo abuurista qoraallo la soo gaabiyey ee wada hadalka. Shaqooyinka hoosaad -hoosaadku waxay u baahan yihiin heer sare oo saxnaan xagga luqadda ah.
Si aad u ogaato, qoraa cinwaan hoosaad ah wuxuu sameeyaa celcelis ahaan $ 45,158/yr. Maya, si aan kala sooc lahayn uma qorin tiro farabadan, stats waa halkan.
Sideed ku soo gashaa? Fudud Waxaad qaadan kartaa koorso lacag -bixin ah (tusaale ahaan, GoSub), ku xariir khadka tooska ah cinwaan -hoosaadyo kale, iyo, malaha ugu muhiimsan, hagaajinta xirfadahaaga maqalka iyo qorista. Midka ugu dambeeya wuxuu tagaa isagoo aan dhihin, ma turjumi kartid haddii aadan maqlin.
Waxaa jira websaytyo badan oo halkaas ka jira oo raadinaya inay shaqaaleeyaan turjubaanno madax -bannaan iyo kuwa wax -ka -beddela ee waayo -aragnimo iyo shahaadooyin kala duwan. Ma wada qori karo dhammaantood, laakiin waa kuwan qaar ka mid ah:
Rev - Mareegahaani waa hoy turjubaan/hoosaad. Ka dib markaad ka gudubto imtixaanadooda, inta kale waa taariikh. Waxay ka mid yihiin shabakadaha madaxa-bannaan ee ugu mushaharka badan.
Netflix - Waa sax, waxaad ku heli kartaa shaqo -hoosaad hoosaad loogu talagalay Netflix adoo ku biiraya Barnaamijka Hermes Netflix.
Xalka khadka Luuqadaha
Nidaamyada Luuqadaha Inc
Kooxda Warbaahinta SDI
Waxaad sidoo kale hubin kartaa; 25 siyaabood oo lacag lagu helo si aad u qorto faallooyinka 2022 | Lacag degdeg ah
Waxaa jira shabakado badan oo kuu oggolaanaya inaad lacag ku hesho si aad uga turjunto dukumentiyada fudud guriga. Kee baa si gaar ah ugu fiican waxay ku xiran tahay waxaad rabto xilligan.
XIDHIIDHKA: Dib -u -eegista Steemit 2022: Ma Xalaalbaa Mise Waa Khiyaamo | Siduu U Shaqeeyo
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad iska diiwaan geliso adeegyada shabakada ee ku habboon baahidaada. Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah mareegaha badan ee kuu oggolaanaya inaad lacag ku hesho si aad uga turjunto dukumentiyada fudud ee guriga:
Waa kuwan talooyin gunno ah oo kaa caawinaya safarkaaga:
Barashada luuqadaha dheeraadka ah waa faa'iido dheeraad ah. Luqadaha badan oo aad si fiican ugu hadli karto oo u qori karto, ayaa inta badan suuq -geyntaadu u badan tahay. Qaado koorsooyin luqadeed, socdaal, ku xirnow kuwa ku hadla luqadaha ajnabiga onlayn si aad u xoojiso raadadkaaga barkadda luqadda.
Intaad baraneyso luqadaha, ha u baran si aan kala sooc lahayn. U tag luuqadaha sida aadka ah loogu baahan yahay, iyada oo aan la dhammaystirin sida Japan, Ruush, Iceland, iwm.
Naftaada kor ugu qaado degel ama baloog.
U -dheji macaamiisha inta ugu badan ee aad awooddo. Turjumaan bilow ah oo aan lahayn waayo -aragnimo, waa lama huraan in aad heli doonto laba diidmo, laakiin ha ka quusan.
Ha sugin ilaa aad ka dhigto gig si aad u bilowdo soo saarista alaab. Waqtigaaga bilaa camalka ah, soo qaado qoraal aan kala sooc lahayn si aad u turjunto. Waxaad ku dari kartaa tarjumaaddan aan kala sooc lahayn faylalkaaga oo u soo bandhigi kartaa tusaalooyin macaamiisha mustaqbalka.
Waxaan si dheer uga hadalnay siyaabaha kala duwan ee aad lacag ku heli karto si aad u turjunto dukumeentiyada khadka tooska ah iyo muuqaal-hoosaad / qoraal qoraal ah.
Hadda, waa markiina inaad halkaas tagto (ama onlayn) oo aad xabbadahaaga ku riddo dhammaan shirkadahaan iyo degelladaan. Runtii waxaan rajaynayaa in maqaalkani ku caawiyo. Chitchat ku filan, tag hel 'em !!
10 siyaabood oo la caddeeyay oo ku saabsan Sida loo helo 300 doollar dhakhso 2022
Dib -u -eegista Transcribeme 2022: Ma Sharcibaa mise waa Fadeexad Qoraal Cusub oo Cusub?
11 Ku Bixi Fursadaha Qoraalka Online 2022
Sidee Zelle Lacag U Sameeyaa? Qaabka Ganacsiga Zelle
Waa maxay Canshuurta Kiddie? Qeexid, dulmar, iyo sida ay u shaqeyso
Sidee Cod bixiyeyaashu Lacag Uga Sameeyaan Fiidiyowyadooda | Hagaha Khabiirka
Waxaan had iyo jeer la yaabi jiray sida dadka wax u qora ay lacag ka sameeyaan fiidyowyadooda. Waxaan ula jeedaa, waxaan kaliya gujinayaa…
Dib u Eegista Xukunka onlaynka 2022 | Sharci ama Fadeexad - Sida ay u shaqeyso & Waxa laga Filaayo
Dad badan ayaa u galgala shabakada iyagoo samaynaya hal hawl oo khadka ah ama ka soo horjeeda sida daawashada fiidyaha, ciyaarista…
Faallooyinka Gamekit 2022: Waa maxay Gamekit | Siduu U Shaqeeyo
Ma waxaad tahay qof jecel ciyaar jecel oo jeclaan lahaa inuu kasbado dhibco ama kaararka hadiyadda isagoo ciyaaraya…
23 Goobaha Kuuban ee Ugu Fiican Si Lacag Loogu Kaydiyo Maalin kasta | 2022 Liiska
Waa dhammaatay maalmahaas markii la dhex rogayo bogagga wargeysyada, liisaska iyo xitaa xaashiyaha ayaa ah habka kaliya…
Xadi Dib -u -eegista Nidaamkayga 2022: Miyaan Sameyn Karaa $ 4000 7 maalmood gudahood?
Ma la yaabban tahay haddii nidaamkayga la xado ma yahay degel hodan ah oo hodan ah ama khiyaano uun? Tani waxay xadin nidaamkeyga…
Sidaan ugu wareejiyay Sweatcoin My PayPal
Sida magacu tilmaamayo, waxaad kasbataa markaad dhididdo. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad oroddo,…